मनाेरन्जन Archives - Page 78 of 115 - Purbeli News
माघ २६ गते दुई नेपाली चलचित्र एकसाथ रिलिज हुने खबरले मीडियामा निकै गर्माएको छ। करिव दुई बर्ष बढी समय पश्चात पर्दामा चलचित्र निर्माण गर्दै फर्कीएकी स्वेता खड्काको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘कान्छी’ माघ २६ मा रिलिज हुदैछ। चलचित्रमा दयाहाङ राई र स्वेता खड्का मुख्य भूमिकामा रहेका छन्। त्यस्तै करिव दुई बर्षको मिहेनत पश्चात अनमोल केसी चलचित्र ‘क...
१०० किलोकी जरिन खान कसरी पुगिन् ५७ ?
अभिनेता सलमान खानकोे फिल्म ‘वीर’बाट बलिउडको यात्रा तय गरेकी जरिन खान कुनैबेला १०० केजी तौलकी थिइन् । सलमानले फिल्ममा लिने पक्का गरेपछि उनलाई पहिलो शर्त तौल कम गर्नुपर्ने राखेका थिए । उनले प्रयास गरिन् तर पूर्ण सफल भइनन् । जसका कारण फिल्म ‘वीर’ रिलिजपछि हिरोइनको मोटोपनमाथि समिक्षकले कटाक्ष गरेका थिए । त्यसपछि भने जरिनले आफूलाई पूरै परिवर्तन ग...
यस्तो देखेपछि राजेश पायलको आक्रोश, कारबाहीको माग गर्दैछन्
कलाले जात धर्म भन्दैन । स्वतन्त्र छ, जस्को लागि पनि ठिक्कै हुन्छ । तर यहि कलाको दुरुपयोग भयो भने कोहि चुप बस्न सक्दैनन् । यहाँ यस्तै भएको छ । गायक राजेश पायल राईले एक तस्बिर आफ्नो फेसबुक पेजमा सार्बजनिक गर्दै कलाको बैज्जत गर्ने माथी कारबाहीको माग गरेका छन । उक्त तस्बिरमा अपुर्ण एक सालिक छ । जुन सालिक स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपालको हो । नेपालको...
‘लुट-२’ पनि पाईरेसीको सिकार, पुरै फिल्म फेसबुकबाट बाहिरियो
राम्रो चर्चा बटुलेको फिल्महरु पाईरेशिमा पर्ने गरेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पसुपतिप्रसाद, कोहिनुर, छक्का पन्जा । अहिले यस्तै गति भएको छ लुट २ को पनि । छक्का पन्जा कै शैलीमा लुट २ पनि पाईरेशिको सिकारमा परेको छ । नोभेम्बर ७ तारिखमा ‘वाच मुभि अनलाइन’ नामक पेजबाट लुट २ सार्बजनिक भएको हो । २ पार्टमा फिल्मलाई अप्लोड गरिएको छ । एक पार्टमा ४८ म...
राजेशपायलले तृतियालाई भने ‘पल्कियो पल्कियो..’ (भिडियो सहित)
पल्कियो पल्कियो नजर पल्कियो थाहै नपाए झैं गर्छौ किन हो ? गायक राजेशपायल राईले लयबद्ध रुपमा यस्तो प्रश्न गरेपछि धरानकी नवगायिका तृतिया गुरुङले पनि उस्तै लयमा जवाफ फर्काइन् । ‘सल्कियो सल्कियो वैंश सल्कियो’ तृतियाको हालै सार्वजनिक गीत ‘पल्कियो पल्कियो..’ मा यस्तो सवाल जवाफ भएको हो । देव पुनको शब्द संगीत र अशोक लोहरुङ राईको एरेञ्ज रहेको गीतमा तृ...
राजेशपायलको सम्मानमा अमेरिकामा ‘राई इज किङ डे’
अमेरिकाको सांगीतिक भ्रमणमा रहेका गायक राजेशपायल राईको सम्मानमा अमेरिकाको रोचेस्टरमा ‘राई इज किङ डे’ मनाइएको छ । राईको सम्मानमा आयोजित समारोहलाई गायक राईले आफ्नो सांगीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो कमाई मानेका छन् । गायक राईका अनुसार रोचेस्टर सिटीका मेयर लभ्ली वारेनसहितको समुहले उनलाई संयुक्त रुपमा प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेका हुन् । हरेक वर्षको नोभेम्ब...
नेपालकी सन्नी लियोनी भन्दै भारतीय मिडियामा छाइन् अर्चना पनेरु, अर्चनाको रेट साढे चार करोड!
काठमाडौँ । नग्न फोटो सुट गराएर एकाएक चर्चामा आएकी अर्चना पनेरु नेपालमा एक समय ब्यापक चर्चामा आइन् । सन्नी लियोनी बन्छु भन्दै अश्लिल फिल्म समेत खिचाउने बताउँदै हिँडेकी अर्चना केही फिल्म र म्यूजिक भिडियोमा खेले पनि पछिल्लो समय नेपाली बजारमा खासै नबिकेका बेला उनी भारतीय मिडियाको रोजाइ बन्न पुगेकी छिन् । भारतीय चर्चित अनलाइन दैनिक भास्करले अर्चन...
ज्योति मगर नेपाली गित संगीतका क्षेत्रमा कुनै नौलो नाम हुँदै होईन । उनको गितको जति चर्चा हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाँहि उनको उत्ताउलोपन र हाउभाउको चर्चा हुन्छ । नेपाली समाजमा अपाच्य शब्दहरुको उच्चारणका कारण उनी बेलाबेला चर्चामा आईरहन्छिन । उनलाई छाडा गायिका भनिएपनि उनको गित संगित लुकीलुकी भएपनि सुन्ने र हेर्नेको भने निक्कै ठुलो जमात छ । कुनै समय नाय...
‘मुन्नी बद्नाम हुइ’की आइटम डान्सर मलाइका भन्छिन् ‘फिल्ममा लामो र मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्न सक्दिन
एजेन्सी । बलिउड फिल्ममा अभिनय नगरे कोही चल्तीकी अभिनेत्री बराबर चर्चित छिन् भने ती मलाइका अरोरा हुन् । उनले विरलै फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् तर पाँच मिनेटको गीतमा आइटम गर्ने गरेकी उनले यही पाँच मिनेटमा चल्तीकी हिरोइनले पछि पार्ने गरेकी छिन् । मलाइकाले फिल्ममा ‘छैया छैया’, ‘मुन्नी बद्नाम हुइ’ जस्ता आइटम गीतमा नृत्य गरेर लोकप्रियता हासिल गरेकी छ...
नाजिर हुसेन र सिल्पा मास्के अब ‘कागज पत्र’मा
वर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिब्युसन प्रा लिको प्रस्तुतिमा ‘कागज पत्र’ बन्ने भएको छ । आज मंगलबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘कागज पत्र’ को घोषणा गरिएको हो । सामाजिक प्रेमकथा र कमेडी जनारामा बन्न लागेको फिल्ममा खिलेन्द्र तिमिल्सिना, मुकेश रेग्मी र प्रजापति सिवाकोटीको लगानी रहेको छ ।कागज पत्रलाई चलचित्र ‘झुम्की’ निर्देशन गरिसकेका अपिल बिष्ट...